Jiri anya gi kpuchie nrọ gi, ma jiri anya gi kpuchie anya gi. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Nrọ bu otu ihe di nkpa n’ime ndu anyi. Ọ bụrụ na mmadụ adịghị arọ nrọ, onye ahụ enwekarịghị nnukwu agụụ na ndụ ya. N'ihi ya, inwe ụfọdụ Nrọ n’ime ndu gi di nkpa.
Ọ bụghị naanị na ọ ga - enyere gị aka inwe ihe ịga nke ọma na ndụ, mana ọ ga - emekwa ka ị nwee onye nwere oke mmasị. A sị na inweghị nrọ na ndụ gị, enwere ike ịnwe obere na ị ga-eme nke ọma.
Na mgbakwunye, nrọ bụ ihe ga-ewusi agwa gị ike. N'ihi ya, ihe kacha mma ị ga - eme bụ ịkwụsị nrọ. Ozugbo ị kwụsịrị nrọ, ụbọchị ahụ ga-abụ ụbọchị ikpeazụ nke ndụ gị.
Agbanyeghị, ị ga-agba mbọ hụ na ịrọ nrọ naanị agaghị abara gị uru. Have kwesiri ijide n'aka na ị na-enyefe chọrọ ịchọrọ iji mezuo ebumnuche gị.
Ikwesiri ịkpa ezigbo nkata ga-enyere gị aka iru ebe ị na-aga. I gha aru aru ike, ma obu ihe ozo gha emechu gi na ndu gi.
Will ga - achọpụta na enwere ọtụtụ ndị na - arọ nrọ nke ukwu na ndị na - ekwu nnukwu okwu. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ igbanwe nrọ gị ka ọ bụrụ eziokwu, ị ga-arụ ọrụ na ya. Mustkwesiri ịkwadebe onwe gị ka i wee nweta ebumnuche gị n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Ewezuga nrọ ahụ ga - ewetara ndụ gị ọtụtụ uru. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-etinyekwu onwe gị n'ihe mgbaru ọsọ gị. Ma, ka ị na-emezu nrọ gị, akparamagwa gị ga-agba mbọ kawanye mma. Ikwu eziokwu, udi agwa ga - eme gị.
N’ihi ya, akwụsịkwala ịna-arọ nrọ maka ihe ị chọrọ na ndụ gị. Otu ụbọchị, ị ga - achọpụta na ị mezuru ebumnuche gị. Thatbọchị ahụ ga-abụ ụbọchị ị ga-atụle nrọ dị ka otu n'ime Jehova Ihe ndị kachasị mkpa na ndụ gị.
Kwere na Ntughari Nrọ Gi
Na-achụ Nrọ nrọ
Nri nweta akara nro
Nrọ Nrọ Nrọ
Na-agba ume edemede
Atụmatụ nrọ maka ọdịnihu
Inspirational Quotes Nrọ
Mepee Anya Gị
Na-agbadata Nkọwa Nrọ Gị
Ntuziaka banyere Ihe Inweta Nrọ
Kwuru okwu banyere Nrọ na Nzube
Kwuru okwu banyere ihe mgbaru ọsọ na Nrọ
Nkọwasị Nrọ dị mkpụmkpụ
Ndụ amamihe Amamihe
Ọdịnihu gị chọrọ gị. Ihe gara aga gị adịghị eme. - Amaghi ama
Agwakọtala ọdịnihu gị na ihe niile gara aga. Ọ dị mkpa ịghọta na ihe niile na - eme…
Mgbe ụfọdụ ụbọchi kachasị mma bụ ịmụmụ ọnụ ọchị dị mfe, ime ka ha mara na ị na-eme nke ọma. - Amaghi ama
Mgbe ụfọdụ mgbugbu kachasị mma bụ ọchị dị mfe, ime ka ha mara na ị na-eme nke ọma. -…
N’agbanyeghi otu odi nma ma obu ihe ojoo si chee na ndu di, teta ubochi obula ma nwe ekele na ndu. Onye ozo n’agha na - alu agha ka o di ndu. - Amaghi ama
Na agbanyeghị ma ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ ị chere na ndụ dị, teta n’ụbọchị ọbụla ma nwee ekele maka…
Chineke agaghị etinye gị ebe ị na-esighi ike iguzo. - Amaghi ama
Chineke agaghị etinye gị ebe ị na-esighi ike iguzo. - Isi okwu ndi amaghi ama: